Muhiimadda Berri waxaa laga arki karaa Apple Stores qaar ka mid ah | Wararka IPhone
Muhiimka Berrito waxaa lagu arki karaa qaar ka mid ah Dukaamada Apple
Berri waa mid ka mid ah maalmaha ay filayaan malaayiinta adeegsada Apple, maaddaama ay tahay munaasabadda soo-bandhigga ee iPhones-ka cusub, laga yaabee sidoo kale inay tahay Apple Watch Series 5 iyo 16-inch oo cusub oo loo yaqaan 'MacBook Pro', in kasta oo ay tani u dhowdahay, sida jiilka cusub ee 11 iyo 12,9-inji ah ee iPad Pro.
Jimcihii la soo dhaafay, Apple waxay ku dhawaaqday in muhiimada aan la heli doonin oo keliya iyada oo loo marayo codsiyada dhacdooyinka Apple TV iyo si toos ah boggeeda internetka, laakiin sidoo kale,sidoo kale waxaa laga heli karaa YouTube, madal meesha muhiimka ah had iyo jeer laga heli karo dhowr maalmood dhacdada ka dib. Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato nuxurka muusigga taageerayaasha kale ee Apple oo aad ku haysato Dukaan Apple ah oo kuu dhow, waad u badan tahay.
Sida aan u aqrin karno 9to5Mac, Apple wuxuu ku bixin doonaa barnaamijka dhexdiisa Maanta Apple, baahinta dhacdada magaalooyin gaar ah oo adduunka ah. Liiska dukaamada bixin doona tooska nolosha lama siideynin, laakiin waxay u badan tahay inay ku koobnaan doonto kuwa ayaa dhowaan la dayactiray iyo in ay leeyihiin shaashad weyn halkaas oo Maanta at Apple fadhiyada lagu qabto.
Laga soo bilaabo Actualidad iPhone waxaan sameyn doonnaa a kormeerka tooska ah ee dhacdada iyada oo loo marayo YouTube, Halkaasoo qaar ka mid ah xubnaha podcast-ka ay si toos ah uga faalloodaan dhammaan alaabooyinka ay Apple soo bandhigto inta lagu gudajiro muxaadarada.
Dhowr saacadood kadib, dhammaan qeybaha boodhadhka ayaa la kulmi doona Falanqee dhammaan wararka si toos ah loogu soo bandhigo kanaalkayaga YouTube. Codka maqalka la dhaho ayaa sidoo kale laga heli doonaa barnaamiyada waaweyn ee Podcast sida iTunes, Spotify iyo iVoox, saacado yar kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Muhiimka Berrito waxaa lagu arki karaa qaar ka mid ah Dukaamada Apple
Raadiyaha Apple wuxuu khatar gelin karaa iibka Tile
Raac bandhigga iPhone 11 toos ah